ပိုပြီးတက်ကြွလာတဲ့ “အင်အားတွေ” နဲ့ “ကျသွားတဲ့မာနတွေ”ကို မြင်နေရလို့ ကောင်းလေစွ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ပိုပြီးတက်ကြွလာတဲ့ “အင်အားတွေ” နဲ့ “ကျသွားတဲ့မာနတွေ”ကို မြင်နေရလို့ ကောင်းလေစွ။
ပိုပြီးတက်ကြွလာတဲ့ “အင်အားတွေ” နဲ့ “ကျသွားတဲ့မာနတွေ”ကို မြင်နေရလို့ ကောင်းလေစွ။
Posted by thit min on Jan 13, 2012 in Myanma News, News | 36 comments
Myanmar Historical News
ယခုခေတ် ခေါင်းဆောင်မှုဟာ အရင်တုန်းက ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ နဲနဲမျှ မတူတော့ဘူးဆိုတာ ကောင်းကောင်းသတိထားကြပါ။ ရှေးတုန်းက ခေါင်းဆောင်မှုဟာ အစည်းအဝေးတက်တာမှာ စပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတာမှာ အဆုံးသတ်တာပဲ။ ယခုခေတ် ခေါင်းဆောင်မှုဟာ ဒါလောက်နဲ့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ယခုခေတ် ခေါင်းဆောင်မှုဟာ ပြာပုံနဲ့ လောင်စာသာ ကျန်တော့တဲ့ ဘ၀ဆိုးကြီးမှ ဗမာပြည်ကြီးကို အသစ်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ရမယ်။
(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ‘လမ်းနှစ်ခွ’ မိန့်ခွန်းမှ)
Special thanks to “KoAungZaya (Myanmar Cupid Community Forums)
-Source: Eleven Journal and Eleven Media Group
-Photo..The voice weekly
-Source: 7Day News Journal
-ဓာတ်ပုံများ – ဧရာဝတီ
Special thanks and Credit to 7day news and Eleven Media Group
ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရဲ့ အင်အားပါတဲ့အပြုံးနဲ့ တက်ကြွတဲ့အမူအရာ။။
ခေါင်းဆောင် ကိုဋ္ဌေးကြွယ်ရဲ့ အားမာန်ပြည့်တဲ့ မျက်နှာ။
သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ ပြောကြားချက် – Eleven Weekly ဂျာနယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့မှာပါ။ တွေ့ဖြစ်အောင် တွေ့မှာပါ။ သူရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်
ကူလုပ်မှာပါ။ ရှေ့ဆက်လုပ်ကြမယ့် အလုပ်တွေကို လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အလှဆုံးဖြစ်အောင် နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းရှိအောင် ကျွန်တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးခဲ့ပြီ/ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ကောင်းစိတ်ဓါတ် အကျင့်ကောင်းတွေကို နောက်လူငယ်တွေကို ပြန်ပြီးတော့ မျှဝေခဲ့မယ်။ အခုပြန်လာတာဟာ ဒေါင်းတွေက အိုးဝေသံပေးပြီး ပြန်လာတာပါ။
ရှေ့ဆက်ပြီး ဒီမိ်ုကရေစီအရေးတွေကို အားနဲ့ ခွန်နဲ့ ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ အခုကျွန်တော်ဘုရာဖူးဦးမှာပါ။ ပါတီအနေနဲ့တော့ ကျွန်တော် မစဉ်;စားထားပါဘူး၊
သို့သော်လည်း ပါတီလုပ်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ကပဲလုပ်လုပ်ပါ၊ အပြင်က လုပ်လို့လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရင်ကတည်းက ပါတီအနေနဲ့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက်တော့အစီအစဉ်မ ရှိဘူး။
သို့သော် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်တော့ ရှိသမျှအားနဲ့ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်သွာ;မှာဖြစ်ပါတယ်။ NLDနဲ့ကတော့ အရင်လိုပါပဲ။ လက်တွဲတော့ မပျက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ၀င်ဖို့ မ၀င်ဖို့သာ ရှိပါတယ်။
ဂျာနယ်တွေအနေနဲ့ လူကြီးတွေကို ပြန်ပြောပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဂျာနယ်တွေ ဖတ်ပါတယ်လို့။ Eleven ကရောပါလားမသိဘူး။
ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင်ကို ပြောပေးပါဗျာ ကျွန်တော်တို့် ၁ ခြောက်လုံး အခွေကြည့်ရတယ်လို့ Congratulations လုပ်လိုက်ပါနော်။ Appreciate လုပ်ပါတယ်လို့။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့် ပြောကြားချက် – The Voice ဂျာနယ်
အခုလို လွတ်မြောက်လာတာ ဝမ်းသာတယ်၊ သူလွတ်သလိုပဲ သူ့တပည့်သားမြေးတွေလည်း လွတ်မြောက် လာစေချင်တယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သလို ဖြစ်မှာစိုးတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားမှာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ စတုတ္ထမဏ္ဏိုင် ဖွံ့ဖြိုးပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ ၇ နှစ်လောက် ခွဲနေရတဲ့အတွက် အတူတူ ပြန်နေမယ်။
အခုကတော့ ဘုရားတရား အလုပ်နဲ့ သစ်ပင်စိုက်တာပဲ လုပ်နေတယ်။
ဒီနေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာသွားတဲ့ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ သား ဇော်နိုင်ဦး (ဓာတ်ပုံများ – ဧရာဝတီ)
” နေကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းပါတယ်။ ပျော်တော့ပျော်တာပေါ့။
မိသားစုလည်းပျော်တယ်၊ လွတ်ပေမယ့်လည်း ကျန်တဲ့ တပည့်တွေရှိနေသေးတယ်။ ဟိုမှာ
မလွတ်သေးတာပေါ့ကွယ်။ ကျန်တဲ့ တချို့လွတ်သင့်လွတ်ထိုက်တဲ့လူတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်။
အားလုံးလွတ်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ အားလုံးမိသားစုတွေနဲ့ဆုံကြတဲ့အချိန်မှာ
ပိုကောင်းတာပေါ့။ သူတို့ကြီးပဲ ဒီလို လွတ်မြောက်လာတာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်လို့တော့
စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်မိတယ်။ အားလုံးလွတ်ရင်ကောင်းမယ်။ လွတ်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းတယ်။
အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ လွတ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရကလည်း တစ်ဆင့်ပြီး
တစ်ဆင့် ဆောင်ရွက်နေမှာဆိုတော့ လွတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်” ဟု
ဦးခင်ညွန့်(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) က မီဒီယာများသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
“လက်ရှိအစိုးရကကောင်းတယ်လေ။ ကောင်းတယ်ဆိုတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့
တွေ့ပြီးပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ လက်ရှိသမ္မကြီးရဲ့
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ၊ နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်
ကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ဦးခင်ညွန့်(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) က မီဒီယာများသို့
အစိုးရသစ်၏ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက်
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် လွတ်မြောက်လာသူ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်က ” အခုလို လွတ်မြောက်လာတာ ဝမ်းသာတယ်၊
သူလွတ်သလိုပဲ သူ့တပည့်သားမြေးတွေလည်း လွတ်မြောက် လာစေချင်တယ်။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သလို ဖြစ်မှာစိုးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်တော်ထဲ
ရောက်သွားမှာကို ကြိုဆိုပါတယ်။ စတုတ္ထမဏ္ဏိုင် ဖွံ့ဖြိုးပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ခုနစ်နှစ်လောက် ခွဲနေရတဲ့အတွက် အတူတူ ပြန်နေမယ်။ အခုကတော့
ဘုရားတရားအလုပ်နဲ့ သစ်ပင်စိုက်တာပဲ လုပ်နေတယ် ” ဟု ၎င်း၏ အိမ်ရှေ့တွင် ရောက်ရှိနေသော
သတင်းထောက်များကို ခြံဝတွင် ငါးမိနစ်ခန့် တွေ့ဆုံခိုက် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊
ထို့နောက် ဦးခင်ညွန့်သည် ၎င်း၏ ဇနီး ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ၊ သားတစ်ဦးတို့နှင့် အတူ
ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံခဲ့ကြောင်း The Voice Weekly သတင်းထောက်က
နိုင်ငံရေးသို့ ၀င်ရောက်ဖွယ် ရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍
ဦးခင်ညွန့်(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း) က ပြောကြားခဲ့သည်။
အနာဂတ်အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ၄င်းက “အဘက အိမ်မှာပဲ မိသားစုတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး
နေချင်သေးတယ်။ မိသားစုတွေနဲ့ မနေရတာ (၇) နှစ်ကျော်ပြီ။ သားတွေနဲ့လည်း အခုမှ
တွေ့ရတာ။ သားက အခုမှရောက်တာ။”ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Photo..The voice weekly
မိသားစုတွေလည်း ပျော်တယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်း ပျော်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့
ကျန်တဲ့တပည့်တွေရှိသေးတယ်။ မလွတ်သေးတဲ့ တပည့်တွေနဲ့ လွတ်သင့်လွတ်ထိုက်သူတွေ
ကျန်သေးတယ်။ အားလုံးလွတ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ လွတ်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းတယ်။
ကျွန်တော်တို့ချည်းပဲ လွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ
မထင်စေချင်ဘူး။ လက်ရှိအစိုးရကလည်း တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်
ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်းမှာ အားလုံး
`လက်ရှိအစိုးရက ကောင်းပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း
တွေ့ပြီးပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေ
လက်ရှိသမ္မတကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေ ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်
အေးအေးဆေးဆေးနေချင်သေးတယ်။ သားတွေနဲ့မတွေ့ရတာ ၇နှစ်ရှိပြီ။ အခုမှ
`ဘုရား၊ တရားပဲလုပ်တယ်။ ပြီးတော့ မာလီလုပ်တယ်။
ခြံထဲမှာ သစ်ပင်တွေ စိုက်တယ်။ ပန်းပင်တွေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သုံးသပ်ပေးပါ။
`ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခု ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်။ ပြီးရင်
လွှတ်တော်ထဲရောက်မယ်။ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို
ပြောရဲဆိုရဲ ပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက် ရောက်သွားရင် နောင်အနာဂတ်မှာ
တိုင်းပြည်အတွက် တကယ် အကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ပါတော့ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့
နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား။`၂၀၁၅ မှာ
လက်ရှိအစိုးရကလည်း စစ်အစိုးရမဟုတ် တော့ဘူး။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတော့
ဒီမိုကရေစီရဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့သွားတော့မယ်။ ပြည်သူကလည်း ဒီမို ကရေစီကျင့်စဉ်တွေနဲ့
လုပ်ရပ်တွေကိုပဲ အားပေးနေတယ်။ လိုလားနေတယ်။ အဲဒီ့လိုလားချက်တွေ အတိုင်း
ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်တယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ပူးပေါင်းပါဝင်နေပြီလေ။
အဲဒါ အားပဲ။ အဲဒီ့အားတွေပေါင်းလိုက်ရင် တိုင်းပြည် အနာဂတ်က
`ရှေ့ဆက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲနေဦးမယ်။ ဘာမှ
မစဉ်းစားသေးဘူး။ နောက်တစ်ခုက တိုင်းပြည်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးပဲရစေချင်တယ်။ အခုလည်း
လုပ်တော့လုပ်နေကြပါတယ်။ လက်ရှိသမ္မတကြီးရဲ့ ဆောင်ရွက် ချက်တွေက
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အားနဲ့
ပေါင်းလိုက်ရင် တိုင်းပြည်အနာဂတ်က ပိုကောင်းလာမယ်´
၁၉၈၈ ကနေ ၂၀၁၄
ကာလအတွင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှာ one of the keep player အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့အခါ
အဲဒီ့အကြောင်းနဲ့ ဒီဘက်အပိုင်းမှာ လုပ်နေတဲ့
`အဲဒါတွေက ပြန်လေ့လာရဦးမယ်။ အပြင်နဲ့
အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာ။ အပြင်မှာ ဘယ်လိုအခြေ အနေတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူး။
နောင်တစ်ချိန်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတဲ့ဦးတည် ချက်မရှိဘဲ
မကောင်းတဲ့ဦးတည်ချက်တွေဖြစ်လာရင် အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတ
ကာက လုပ်ဆောင်လာရင် မီဒီယာကတစ်ဆင့် လူထုဘက်ကနေ ရပ်တည်မှာပါ။´
Source: 7Day News Journal
ဒါတွေဟာ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် အတွက် ကောင်းသော အင်အားတွေ၊မျှော်လင့်ချက်တွေပါဗျာ..
ခုလို လွတ်မြောက်လာတာကို အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာပါကြောင်း…
ဦးသိန်းစိန်ကြီးလဲ သည့်ထက်တိုး၍ ပြည်သူ့ အသံအတိုင်း လက်ခံဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး သမ္မတကောင်းကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါစေခင်ဗျား..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က.. သူ့မိသားစု..သူ့ဘ၀ကိုစွန့်.. သူ့လုပ်ကြံသူတွေအကုန်လုံးကို ခွင့်လွှတ်ပြီး.. …တာဝန်ခံလုပ်သွားတယ်လို့.. မြင်နေမိတယ်..။
အင်း ဆက်လက်တော့ စောင့်ကြည့်နေရဦးမှာပါပဲ… ဒီလိုသာ ပြည်သူတွေအတွက် စဉ်းစားပေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်ကြီးက မကြာခင်အချိန်အတောအတွင်းမှာ လှပလာတော့မှာပါ။
တွေးတတ်ရင် ဆတ်ဆတ်ခါ စရာတွေချည်းပါ။
အမေစုကသူ့ဖမ်းခဲ့တဲ့သူတွေအပါအဝင် အားလုံးရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကို (ကျောသားရင်သားမခွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့)
ဗိုလ်မှူးစန်းပွင့်ဆိုတာ ကိုဇာဂနာကို ခေါင်းဆောင်ပြီးဖမ်းခဲ့သူလို့ကြားဘူးပါတယ်။
ကိုဇာဂနာက ထောင်ဝင်စာ မျှကျွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီအတောအတွင်းကိုဇာဂနာလွတ်လာ
တော့ ဗိုလ်မှူးစန်းပွင့်မိသားစုကိုသွားပြီး တတ်နိုင်သလောက် အားပေးကူညီခဲ့တယ်လို့ ကြားဘူးတယ်။
ကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်ထားသူကို မေတ္တာပြန်ထားနိုင်တဲ့ အားကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတပိုင်းပေါ့နော်။
ဟိုဘက်ကစဉ်းစားလိုက်ရင် “ငါအလှဲ့မှာ ဆိုးပေမဲ့ သူ့အလှဲ့မှာကြတော့”လို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။
မျက်ရည်ကျသွားမယ်။ အဲဒီလိုလူတွေဗျာ။ လေးစားတယ်။ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုတာထက်ပိုပြောချင်တယ်။
တကဲ့ “ဆုကြီးပန်” သူရဲကောင်းတွေရဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်းဟာ လူသားစိတ်ရှိသူတိုင်းရဲ့
သံဝေဂ ရစရာတွေပါ အာဏာဆိုတာရေပွက်ပမာ
ကျုပ်ကတော့ NLD အနေနှင့် ဦးခင်ညွှန့်ကို ကြိုဆိုသင့်တယ်လို့ထင်တယ်
ဒီနေရာမှာမှ သံဝေဂမရရင် ဘယ်တော့မှ ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး
ပြောသာပြောတာပါ နိုင်ငံရေးကို သံဝေဂနှင့်
ငဲ့ညှာကြပြီး ရှေ့ဆက်ကြဘို့ ဘယ်သူမှ မကြားတဲ့အိမ်သာထဲကနေ
ကဘုန်းကျော်လို ကုန်းအော်ရင်တော့ အီအီးတွေထွက်.လိပ်ပါထွက်လိမ့်မဗျ
ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း တက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ…
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးနေ၀င်း၏ မြေးနှစ်ဦးဖြစ်သူ ကျော်နေ၀င်းနှင့် ဇွဲနေ၀င်းတို့ လဲလွတ်လာတယ်လို့ကြားတယ်။
ကိုသစ်မင်းနဲ့ အတူ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာမိပါတယ်။
သတင်းကောင်းလေး ပါးပေးလို့ ကျေးဇူးပါပဲ။
ဒီနေ့ကတော့ မင်္ဂလာသတင်းကြားရတာပါပဲ၊ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ ကောင်မွန်တဲ့ နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေး တည်ဆောက်မှု့တွေမှာ မိမိတို့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ကြရင်း ခေတ်မှီတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါစေလို့ ……….
ဒါဆိုရင် မကြာခင်မှာ “ ဆန်ရှင် ” တွေ ပျောက်ကွယ်တော့မှာ အမှန်ပဲပေါ့နော်
အရင်ကလို သူများကို အပြစ်ပုံလို့ မရတော့ ဘဲ တိုင်းပြည် နဲ့ လူထု တိုးတက်ဖို့ ကိုယ့်လက်ထဲ ကို တာဝန် ရောက်လာပြီ ဆိုတာ သိကြရပါမယ်။
အရင် အတိတ်အဟောင်း တွေကို သင်ခန်းစာ ယူဖို့အတွက်သာ ထားပြီး အနာဂါတ်အတွက် လက်ရှိ ကောင်းဖို့ အတွက် သာ စိတ်ထဲ ထားသင့်သည်ဟု ထင်ပါတယ်။
ရေသာခိုအပျင်း စိတ် တွေ၊ အချောင်ရလိုစိတ်တွေ၊ ကိုယ့်တစ်ဘို့ ထဲ ကြည့်တဲ့စိတ် တွေ၊ အာဃတတွေ နဲ့ သူများကို အပြစ်ပုံချင် စိတ် တွေ လျှော့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သက်လုံကောင်းဖို့ ပြင်ထား ရန် လိုပါသည် ဟုလဲ ထင်ပါတယ်။
အခု တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ပွဲ စပါပြီ။
သူတို့ ဖက် က ဖြေလိုက် တဲ့ ကြိုး ဆိုတာကို ကိုယ်က အချက်ကျကျ တက်ညီလက်ညီ သတိ နဲ့ ဆွဲနိုင်မှ ဆိုတာ သိရပါမယ်။
အဲဒီ ကြိုး နဲ့ ဆင်းရဲတွင်း ထဲမှ ကိုယ့်ပြည်သူလူထု တွေ လွတ်မြောက်ရန် အတွက် ကြိုးကိုင် မည့်သူများ အချင်းချင်းပြန် မတွန်း မတိုက် မိဖို့ လဲ လိုပါတယ်။
ကျွန်မ ကတော့ အဲဒီ စတုဒီသာအလှူပွဲ ကြီး အတွက် ကိုယ် ဘယ်နေရာ မှာ ပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ စမ်းစစ်ကြည့်မိပါသည်။
အခုချိန် မှာတော့ မဏ္ဏပ် အတွင်းမှ ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ် နေသူ များ အတွက် မဏ္ဏပ်အပြင်က နေ တုတ်တစ်ချောင်း နဲ့ ကျီးခြောက် ၊ ခွေးခြောက်၊ ယင်ကောင်မောင်း တော့ လုပ်နေ နိုင်ပါသည်ရှင့်။ ;-)
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ကတော့ ကျွန်မ တို့ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေကို ရှင်သန်လာစေတဲ့ နေ့ပါဘဲ။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကိုရော သူ့ကို ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် များကိုရော၊ သူတို့ ကို ယုံကြည်ပေးခဲ့ တဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရော ပြည်သူလူထု အားလုံး ကိုယ်စား ကျွန်မ က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးညွတ် ကန်တော့ ပါတယ်။
မလတ် ရဲ့စကားကိုဘဲ ……..ditto…. လိုက်တော့မယ် :grin: :grin:
မြန်မာပြည်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း အလှည့်အပြောင်းမှာ ကောင်းသော ပြောင်းချင်းတွေနဲ့ စတင်လာတာမို့ လှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
သိက္ခာရှိသော အေးချမ်းတည်ငြိမ်သော ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့် မြန်မာပြည်ကို မြင်လိုပါတယ်။
တချိန်တုံးက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ဒေါ်စုဆီ သူ့ခင်ပွန်းကပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ချောကလက်ကဘယ်နှစ်တောင့်ဆိုပြီးဖတ်ပြတာ မြင်ယောင်ပါသေးတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ခွင့်လွှတ်သည်းခံမှု သဘောထားကြီးမှုဟာ အရာရာကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပါလားဆိုတာ သက်သေပါပဲ။
ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ လေးစားဖွယ် လူတော် တစ်ယောက်ဖြစ်သလို
ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေး အတွက် မတူညီတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်များပေါင်းစည်းနိုင်မယ်ဆိုရင်
တိုင်းပြည်အတွက် လှပတဲ့ အနာဂတ်လေး မကြာမီ တည်ဆောက်နိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်မှန်းပါတယ်။
ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ ဒေါ်စုခင်ပွန်း မိုက်ကယ်အဲရစ် သေခါနီး နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သူ့အမျိုးသားကို ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာကို လစ်လျူရှုခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီတုန်းက သတင်းစာထဲမှာ လိမ်လည်ပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ရအောင် ကြံနေတယ်နဲ့ စွပ်စွဲရေးသားခဲ့ကြသေးတယ်။ ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးပါပြီလေ၊ လက်စားချေ သင်ပုန်းချေ ရေးထက် အဲဒီပေးဆပ်မှုတွေကို အနာဂတ် မြန်မာပြည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အာမခံချက်ရှိဖို့ အရင်းအနှီး အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင် လုပ်ရမယ်။ ပြောချင်တာ သင်ပုန်းချေဖို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အာမခံချက် ဥပဒေပြဌာန်းချက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ချက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ လဲလှယ်ပေးရမယ်။ ဒါမှ အသက်ဆုံး ဘဝပျက် အနှိပ်စက် အဆင်းရဲ မတရားအလုပ်ခံခဲ့ရသူများ အချိန်ကာလများအတွက် တရားမျှတမှု ရှိမှာပေါ့။ အနာဂတ်ကာလအတွက်လည်း သင်ခန်းစာယူစရာ လေးစားလိုက်နာစရာ ဖြစ်သွားပါမယ်…။
အားလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားကြီးမှု့ အမြင်ကျယ်မှု့ အစွဲကင်းမှု့ က ပေါက်ဖွားလာတာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကွင်းထဲမှာ လူစုံပါပြီ။
ပန်းတိုင်တခုထဲဆီ တည့်တည့်သွားနိုင်ဘို့ အရေးကြီးတာပါပဲ။
မေတ္တာရောင်ပြန်ဟက်ပါတယ်…ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်စွန့်လွှတ်အနှစ်နာခံတတ်သူဆိုတာ ကမ္ဘာကသိပါတယ်။ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးသိဖို့လည်းလိုပါလိမ့်မယ်။။
(The Salutation to the Dawn based onaVedic Hymm မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထုတ်နုတ်ဘာသာပြန်ပါသည်။)
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တေ့ာ.. ဒါမျိုးနေ့တွေ.. “ပန်းစည်း”တွေ ရောင်းကောင်းတာပေါ့…။
“တချိန်လုံးအိမ်မှာ ဦးခင်ညွန့်ကရှိနေခဲ့တာပါတဲ့၊ ၂၀၀၅ ဂျူလိုင်ဗီဒီယိုကအမှုစစ်ဖို့ခေါ်
သူကြီးရယ် ကျနော်တို့လည်း မနေ့က အလုပ်ကလူတွေနဲ့ လွတ်လပ် ခြင်းပါတီ လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်
ဘာမှတောင် မသိတော့ဘူး နောက်နေ့ကျတော့ အခုတောင် ရီဝေေ၀ နဲ့
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့၊ကိုကိုကြီးတို့အပါအ၀င် ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျသူတွေလွတ်မြောက်ကြတာကိုဝမ်းသာကြသလို၊ ဦးခင်ညွန့်တို့လိုမုဆိုးမှသား
ကောင်ဖြစ်ပြီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေလွတ်မြောက်တာကိုလည်း၊ပြည်သူအများစုဝမ်းသာပိတိဖြစ်ပေးကြတာကိုပါတွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့၊ကဗ္ဘာပေါ်မှာ အလွန်ရှားပါးသောအာဃာ တချေ ဖျက်တတ်တဲ့ စိတ်ထား နဲ့၊ သင်ပုန်းချေလွယ်ပြီးကိုယ် ချင်းစာပေးတတ်တဲ့ ကောင်းမြတ်သော မြန် မာ့စိတ် ထားကိုဖေါ်ပြရာရောက်တာ အလွန်ပိတိဖြစ်၊ဂုဏ်ယူစရာပါပဲခင်ဗျား၊ လွတ်မြောင်အောင်ဆောင် ရွက်ဦးဆောင်ပေးကြသူ များရဲ့ ညီညွတ်မှု သင်္ကေတအဖြစ်လည်း ထင်သာမြင်သာ ရှိလှပါကြောင်း။ သမိုင်းမှာ ကောင်းမြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအဖြစ် တည်မြဲနိုင်ကြပါစေလို့။
သင်ပုန်းချေတယ်ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဟာ ကျယ်ဝန်းနက်ရှိုင်းလှပါတယ်။
(ကိုယ်တိုင်တောင် လုပ်နိုင်ဖို့ အင်မတန် ခဲယဉ်းပါတယ်။)
သင်ပုန်းချေနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ကြည်ညိုပါတယ်။
လူထုကို ဦးဆောင်မယ့်လူတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်မှု၊ အနစ်နာခံမှုတွေနဲ့အတူ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ လူထုရဲ့ ကြည်ညိုလေးစားမှုကို ရရှိပြီး မှန်ကန်စွာ ဦးဆောင်နိုင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
လူထုထဲက လူထုတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် ထိုက်တန်သော လူထုဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားကြပါစို့……
ကို သစ်မင်းကခုလို share လုပ်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ခင်ဗျားတို့ အနေအထားတွေက မာန်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့စဉ်းစားဘို့ကို
မျက်ဝါးထင်ထင် “သူ” ပြသွားခဲ့တယ်။
ဒီမိုကရေစီသာရှိရင် ခင်ဗျားလဲသူများတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူဖမ်းလို့မရသလို၊
ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လဲ ဒီဘဝမရောက်ဘူးဆိုတာ သိပြီပေါ့နော်၊ ကိုယ့်လက်ပူတော့ပူမှန်းသိပြီပေါ့။
ကောင်းပါတယ် အားလုံးအတွက်တော့ နမူနာယူစရာသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဗျာ။
လွတ်လပ်ရေးရနိုင်လောက်တဲ့ စည်လုံးညီညွတ်မှုရှိရမယ်” တဲ့………
နိုင်ငံရေး “ဈာဉ်” ဆိုတာပျောက်ခဲပါတယ်။ လေ့လာကြည်ရသလောက် ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွေကြည့်ရင် ရာထူးကဖယ်ရှားခံရပြီးရင် သို့မဟုတ်အနားယူကြရပြီးရင် သတင်း စုံစုံမြုတ်သွားလေ့ရှီပါတယ်။ ဒီလိုမြုတ်သွားကြပေမဲ့ သူတို့အတွေး အခေါ် အယူအဆ နိုင်ငံရေးဝါသနာဟာပိုလို့တောင်ရှင်သန်ကြီးထွားလာကြပါတယ်။ မကြေနပ်ချက်တွေရှိရင် အာဃာတ ပိုကြီးလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုလက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာ ယခင်အနားယူသူတွေကို ခေါ်ယူတာဝန်ပေးတာတွေ၊ အကြံယူတာတွေရှိနေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ဟာလဲ တနေ့မှာ နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာပြန်မပေါ်လာဘူးမယ်လို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။
(သွားလေသူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သခင်နုကို လွန်ခဲ့သော နှစ်(၄၀)လောက်က ရန်ကုန်မြို့လယ်တနေရာမှ အမြို့မြို့အနယ်နယ်အနှံ့ ရခိုင်လေဘေးအတွက် အလှူခံထွက်စဉ်က သူဘယ်လောက်နိုင်ငံရေးစိတ်မကုတ်သလဲ ဆိုတာကို သူပြောပုံဆိုပုံတွေကြည့်ပြီးမြင်ရပါတယ်။)
လူသာသေမယ် နိုင်ငံရေး ဈာန်ဆိုတာတော့ ဘယ်တော့မှမသေဘူးခင်ဗျ။
Credit to ဆရာနေရဲနီ and
ထိုသူများသည် စစ်ရှုံးသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ
စစ်ဖြစ်စေရန် ဖန်တီးခဲ့သောကြောင့် ဆိုတဲ့
ကြိုးမိန့်ကို အတည်ပြုဘို့ လက်မှတ်ထိုးပေးရတဲ့အတွက်
ဘယ်တော့မှ နောင်တမရဘူးလို့ ၀င်စတန်ချာချီ ကပြောခဲ့တယ်။
ကြိုးစဉ်ကိုခေါင်းမော့ ရင်ကော့ပြီး တက်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်မှ မပါဘူး။
အာဏာအတွက် သားမက်ကိုတောင် အရှင်မထားခဲ့တဲ့လူက
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဂုဏ်အသရေရှိစွာ မကျဆုံးရဲလေတော့
ကြိုးစင်ထက်မှာ မချိမဆန့် အသက်ထွက်ရရှာတယ်။
အာဇာနည်အဖြစ် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အသေခံသွားမယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ မိုမာကဒါဖီ
သွေးသံရဲရဲနဲ့ ခွေးသေ၀က်သေ သေရတယ်။
ဦးကြည်မောင် ခင်ဗျားတိုင်းပြည်ကို ဘယ်လောက်ချစ်သလဲ
ကျုပ်က ခင်ဗျားထက် ပိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့
တောခွေးတွေ ယုန်သူငယ်ဘ၀ ရောက်သလို
သိပ်မကြာပါဘူး ဇာတိသရုပ် ပေါ်လာတယ်။
ထို့အတွက် ထောက်ထားညှာတာသင့်ပါသည့် အကြောင်း
မနှစ်ကတော့ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်မိပါရဲ့။
နွံကိုထိုးဖောက် ထွက်လာတဲ့ ပတ္တမြားအရောင်က
သူ့ကိုယ်သူ တိုက်ကြက်လို ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့
တိုက်ကြက်မဖြစ်ဘဲ အသားစားကြက် ဖြစ်ရရှာတယ်။
သူပို့ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးသမား ခွပ်ဒေါင်းတွေ
တန်ခိုးအနန္တထွားပါတဲ့ ပုဒ်မ ၅(ည) နဲ့အတူ
မဆုံးနိုင်တဲ့ အကာလ ညများစွာကို ယုံကြည်ချက်ပြင်းစွာ ကျော်ဖြတ်ရင်း
မတရားမှုကို ဆန့်ကျင် အံတုပြီး
ခွပ်ဒေါင်းတို့ရဲ့ သွေးဟာ ရဲရဲနီနေတုန်း
ကမ္ဘာမကြေဘူးဟေ့ သီချင်းသံ မိုးယံတိုင်နေဆဲ။
ကြွေတလှည့် ကြက်တခုန် နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်မှာ
အတုံ့အလှည့် ဝဋ်လည်တယ်ဆိုတာ ဒါပါဘဲ။
ကဗျာရှင် နေရဲနီအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
နားလည်သလောက်… န၀တ..နအဖ တို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို.. အခြေခံဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ်ပေးထားတယ်….
ဦးခင်ညွှန့်က.. နအဖကိုယ်တိုင် အပြစ်ပေးထားတာခံခဲ့ရတာမို့.. အဲဒီအခြေခံဥပဒေအကာအကွယ်ယူလို့ ရ/မရ မသိပါဘူး..
မရရင်တော့.. မြန်မာ့သမိုင်းမရိုင်းရအောင်… တရားရေး (justice ) တင်သင့်တယ်ထင်မိပါတယ်..။
နောက်တခုက… justice တင်သည်ဖြစ်စေ…မတင်နိုင်သည်ဖြစ်စေ….
ဦးခင်ညွှန့်အနေနဲ့.. သူရဲ့ရက်စက်တဲ့.. လုပ်ရပ်တွေ.. အမှားတွေကို.. ကာယကံရှင်တွေဖိတ်ပြီး.. တရားဝင်ကမ္ဘာသိ.. ၀န်ချတောင်းပန်သင့်တယ် ထင်မိပါတယ်..။
တောင်းပန်ခြင်း..ကြေအေးခြင်း အလေ့အကျင့်ကို.. မြန်မာ့သမိုင်းမှာကျန်ရစ်အောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်..။
သဂျီးကို တောင်းပန်ပါဒယ်။ ကျုပ်ကို သဂျီး ပြန်တောင်းပန်ပေးပါ..။
သြော်…”အာဏာ”။ “စံ” ကြတုန်းတော့ ဘ၀ကိုမေ့ (မမေ့ဘူးပြောကြပေမဲ့ မေ့ကြသူတွေချည့်ပါ။)…။ ခံတဲ့အချိန်ကတော့ ကျောကော့နေအောင်ခံကြပေါ့။ ဒါဘဲဟဲ့..နိုင်ငံရေးလောကဓံ…။